Gel isikhonkwane sepolisi
I-Gel isilumkiso sesilumko sidibanisa i-intle ye-nail ipolish kunye ne-gel. Ukugqoka i-gel varnish inokuhlala kwaye ihlala ihlala ihleli, kuba i-gel iqulethe ukusabalalisa okuphakathi, okwenza isetyenzi esakhiweyo kwisipikili. Isisombululo sokubhinqa kwesikhonkwane kunye ne-gel varnish yilungileyo kulaba bafuna ukuzama imibala eyahlukeneyo kunye neepateni, kunye nalabo bafuna ukufumana umphumo wesikhathi eside kwaye musa ukukhumbula iiveki ezimbalwa malunga nemfuneko yokuzisa izipikili.
I-Gel i-verarn isetyenziswe ngokukhawuleza njengoko i-nail ipolish eqhelekileyo kwaye idlulele kwiiveki ezintathu. Ukuthelekisa ngezinye iindlela zokomeleza izipikili, i-gel inezinzuzo ezithile: akufuneki ukuba ifakwe, ayiyivumba, isicelo sayo asithathi ixesha elide, ingubo ayifuni. Kwakhona le varnish iyininzi yokusebenza, ingasetyenziselwa ukuguqulwa kwesiFulentshi kunye nezinye iintlobo zeemihlobiso, umzekelo, ukulungiselela imodeli. Omnye "kodwa" - i-gel i-varnishes ayiyiqhenqanga yodwa, uya kulufuna i-catalyst ekhethekileyo. Kwakhona kufuneka kukhunjulwe ukuba loo nto ikhonkwane i-neil ishicile ngokwaneleyo kwimeko yokutshintsha kweqondo lokushisa, ngoko kwixesha lokubanda izandla kufuneka zikhuseleke, ngaphandle koko, ukuba isambatho sivunyiwe, kuya kufuneka kususwe kwaye kwenziwe kwakhona.
Ngokwakheko, i-gel isilumkiso isilumkiso sifana ne-bio-gel. Zithambile, ziguquguquke kwaye zisuswe ngoncedo lwezixhobo ezikhethekileyo, eziqhelekileyo zibandakanya amafutha kunye nezondlo ezondla kunye nokunciphisa i-cuticle kunye nezipikili. Ukubunjwa kwe-gel i-varnishes kubandakanya nezixhobo ezahlukeneyo zokuncedisa ukomeleza izipikili.
I-Gel i-varnishes iveliswa ngeendlela ezimbini: ukuphilisa ukukhanya (ukukhanya okukhanyayo) kunye nokungenakunyanga.
Eyokuqala inezo zinzuzo ezingentla, zicutshungulwa lula, zinyanzelise ngokukhawuleza kwaye ziqhotyoshelwe ngokukhawuleza kwiplani yesilumko semvelo. Isiqalo sabo esona siqalo kwiindawo eziliqela, uluhlu ngalunye lumele lube ludla ixesha elifutshane ngaphantsi kwesibane se-ultraviolet, phantsi kwefuthe apho iplangwe ye-nail kunye ne-gel coalesce ibe yinto enye. Ezi varnishes kufuneka zigcinwe phantsi kwe-UV ukukhanya kwamandla athile, okubonakaliswa kwipakethi ye-lacquer, ngaphandle koko umphumo oyifunayo awuyi kufezwa.
Uhlobo lwesibini lwe-gel i-varnishes luphilisa ngokukhawuleza, ukuqiniswa kwezinto ezisebenzayo okanye ukuthungwa okuthile emanzini kuyimfuneko. Ezi zivini zifana ne-glue, ngenxa yesicelo sabo zisebenzisa i-brush eqhelekileyo, njengokwenza nayiphi na ipolisi yesikhokelo, okanye i-tube ye-varnish, apho i-gel isatshalaliswa kakhulu kwi-nail. Ekugqibeleni, i-gel ephilisayo yokukhanyisa iyakubhalwa nge-drop of catalyst okanye i-spray ekhethekileyo okanye amanzi alula.
Indlela yokwenza ingwenya yengwe?
Indlela yokwenza iipatheni kwizipikili
Ukuguqulwa kwamanxeba kwiisilumko ezikhutshweyo - umfanekiso wezinto eziphambili zoyilo
Ukunyangwa kwamanxeba kunye nokunyanga
Izipikili ezintle: ukunakekelwa kwekhonkwane
I-Scarface: njani yokwenza izikratshi kunye nezicucu zeHalloween
Ubisi lukaMama, yintoni efunekayo ukuze kubonakale
UTatyana Navka noDmitry Peskov baqeshwe ngomhla womtshato
Ngaba kufuneka ndifumane umkhuhlane?
Umntu owayesithandayo u-Xenia Borodina uya kuthetha enkundleni ngokumelene noVadim Kazachenko
Patties "Scallops" ngesibindi kunye namaqanda
ILizwi loMalusi: Indlela yokugcina kakuhle iLente Elikhulu
Ukutya kwiinkcukacha: iresiphi ye-cranberry-cherry sauce
Indlela yokudibanisa ubomi bobulili bosapho
Indlela yokubhala i-EGE ngesiRashiya
Imilenze yenkukhu kwisikhwama
Umalusi waseAustraliya uCollie
Imifuno enomsila, njengomtya wokutya ozithandayo
Umbono wendlela yokufumanisa umntu ophumeleleyo